Fitaovana fanao any an-trano, mpanamboatra fanaka fisakafoanana | Fanaka NuTrend
Fehin-kibon'ny vy sy hazo amin'izao fotoana izao ho an'ny tahiry 502145
1. Fehin-kazo vita amin'ny vy sy kitay ankehitriny ho an'ny fitehirizana.2. Habeny: L30xD30xH162cm / 11.8 '' x11.8 '' x63.8 ''.3. Ny rafitra vy matanjaka amin'ny faran'ny mainty dia manome fanohanana matanjaka sy fifandanjana.4. Ny talantalana hazo mainty dia mamorona endrika indostrialy sy ambanivohitra.5. X-mamelatra mitondra endrika tsara tarehy izay manakana ny boky tsy hianjera.6. Mifanaraka tsara amin'ny zorony rehetra mba hanampiana amin'ny fampiasana ny efitrano malalaka.
Fehin-kazo vita amin'ny hazo misy ankehitriny 4 ho an'ny fitehirizana 502160
1. Fehin-kazo vita amin'ny hazo misy ankehitriny 4 ho an'ny fitehirizana.2. Size: L80xD29xH120cm / 31.5 '' x11.4 '' x47.2 ''.3. Ny talantalana 4 malalaka dia manome ny habaka fitahirizana ilainao rehetra.4. T25mm matevina beveled ambony misy haingon-trano.5. Ny tongotra 40x25mm maharitra dia manome fanohanana voalanjalanja amin'ny haingon-trano ao an-tranonao.6. Ireo mpandoro X ankehitriny dia mitondra endrika tsara sy milamina izay manakana ny boky tsy hianjera.7. Tsara habe raha tehirizina na aiza na aiza.
Tabilao Console Wood tery ankehitriny miaraka amin'ny fanaka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny 203505
1. Tabilao Console Wood tery ankehitriny miaraka amin'ny fanaka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny.2. Size: L86.6xD30xH80cm / 34.1 '' x11.8 '' x31.5 ''.3. Namboarina tamin'ny MDF tamin'ny loko eco-friendly.4. Voaravaka volom-baravarana haingon-trano roa.5. Toerana fitehirizana be dia be noho ny vatasarihana roa malalaka sy faritra amin'ny talantalana roa ambany.6. Misy amin'ny haingon-trano miendrika samy hafa amin'ny lafiny roa.
Latabatra sezarana moderina tsy manam-paharoa ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny 203367
1. latabatra latabatra accent maoderina tsy manam-paharoa ho an'ny efitrano fandraisam-bahiny2. Size: L45xD35xH60cm / 17.7 '' x13.8 '' x23.6 ''3. T25mm tery veneer terebika kanto izay mameno tsara ny vatana miloko fotsy4. 4.5 * 4.5cm Tongotra matevina ho an'ny fananganana kalitao sy fijoroana matanjaka5. Toerana fitehirizana be dia be noho ny vatasarihana boaty sy faritra malalaka6. Ahitana sary mivalona akaiky miadana vita amin'ny slider vy sy kofehy maharitra.7. Famolavolana nentim-paharazana tsara tarehy, volavolan-doko roa tonta, Ampahany amin'ny laharana AIX.
ATOLOTY ANY Etazonia
Avelao fotsiny ny mailaka na nomeraon-telefaona anao amin'ny endrika fifandraisana mba hahafahanao mandefa sivana maimaim-poana ho an'ny volavolainay!